Rashford: “Ibrahimovic wuxuu muhiim u yahay tayada kooxda.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Rashford: “Ibrahimovic wuxuu muhiim u yahay tayada kooxda.”
Rashford: “Ibrahimovic wuxuu muhiim u yahay tayada kooxda.”
Muqdisho – Xiddiga da’da yar ee Manchester United, Marcus Rashford ayaa sheegay in faa’iidada ku sugan ka garab ciyaarista Zlatan Ibrahimovic sanado badan laga dheefsan doono – isaga oo ku qeexay saaxiibka ay isla weerar tagaan mid aan loo heli karin badal buuxiya booskiisa.
35-jirkan ayaa in badan kasii mid noqoneyn xulka Macalin Jose Mourinho taniyo dhamaadka xagaagan maadaama dhaawac jilibka ah uu soo gaaray ciyaar katirsaneyd Europa League oo ay la ciyaareen Anderlecht. Waxaana lagu wadaa in heshiiskiisu idlaado isla xagaaga.
Warar ku-tiri-ku-teen ah ayaa la isla dhex marayaa oo ku aadan mustaqbalka laacibka kaas oo 28 gool u dhaliyay kooxda xagaagan dhexdiisa. Waxaana lala xiriirinayaa horyaalka MLS, in kasta oo Rashford rumeysan yahay in laacibka reer Sweden aan la badali karin.
“Wixii aan ka bartay waa wax aan waxna ku badalan karin. Saameynta uu ku leeyahay da’yarta kooxdana waa cajiib. Wuxuu muhiim u yahay horusocodkeenna,” ayuu yiri Rashford.
Previous: Wenger oo huba in Sanchez aan laga iibin doonin koox ka dhisan Horyaalka England PL